नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी बर्खास्त
सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै भण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
उच्च हिमाली भेगमा लेक लागेका बिरामीको उपचार खर्च कतिसम्म लाग्ला ? बेंसी झार्दा पनि निको भइहाल्ने यस्ता बिरामी पर्यटकबाट काठमाडौंका प्रतिष्ठित अस्पतालले ६० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च बिमाबाट दाबी गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छोराछोरीलाई नागरिकता लिँदा बुबालाई अनिवार्य र आमालाई स्वैच्छिक बनाइएकामा सांसदले विरोध जनाएका छन् । सरकारले संसद्‌मा पेस गरेको विधेयक महिलामैत्री नभएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सबै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिता पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही सञ्चारमाध्यमले महासंघको लुम्बिनीमा सम्पन्न बैठकका सन्दर्भमा भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषित गरेको प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
हिमा गाउँपालिकाको ठूला चिउडीमा पुन: झाडापखाला प्रकोप फैलिएको छ । एक साताभित्र ५० भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा बिरामी परेका छन् ।
धेरै संख्यामा बकुल्ला मारेको आरोपमा चितवन प्रहरीले ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्याको आरोपमा फरार अभियुक्त थप दुई जना महोतरी जिल्ला अदालतमा हाजिर भएर साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।
भूकम्पले भत्किएको धरहरा निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति आज चौथो पटक पनि स्थगित भयो ।
सरकारले तीन दिन भित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्दै उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
पर्यटकका नाममा मोटरसाइकल पास
यातायात व्यवस्था विभागले पर्यटक भिसामा आएका एक फ्रान्सेली नागरिकलाई मोटरसाइकलको ब्लु बुक दिएको भेटिएको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको बन्दमा संग्लन भएको आरोपमा प्रहरीले देशैभरीबाट २६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार बन्दकर्ताले १७ जिल्लामा नक्कली र सक्कली बम राखेर आंतक सिर्जना गरेका थिए ।
प्रहरीलाई घूस बुझाएको अभियोगमा मलेसियामा दुई नेपालीलाई १ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ । उनीहरुलाई जनही १० हजार रिंगिट जरिवानालगायत सजाय पनि तोकिएको छ ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर विन महोम्मदले एकद्वार प्रणालीमार्फत नेपालसहित विदेशी कामदार आपूर्ति गरिने बताएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये अधिकांश घरभाडा विवादका हुन्छन् । न्यायिक समितिमा गतवर्ष कार्तिक २८ देखि असार मसान्तसम्म एक सय ८३ वटा उजुरी परेको थियो ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण गर्नका लागि जनचेतना जगाउने उद्देश्यसहित मंगलबारदेखि ‘एक टन कार्बनमा बस्नुहोस्’ अभियान सुरु गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले मुस्लिम समूदायका बिदा कटौति गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाएको दोहोरो र अस्वाभाविक करको समस्या सामधान गर्न संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मोरङको लेटाङ नगरपालिकास्थित जाँतेमा रहेको एक विद्यालयको खानेपानी ट्यांकीमा अज्ञात व्यक्तिले हालेको विषादीका कारण २० जना विद्यार्थी बिरामी परेका छन् ।
उपत्यकाका आधा दर्जन स्थानमा नक्कली बम, ७ बन्दकर्ता पक्राउ
नेत्रबिक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले म‌ंगलबार आयोजना गरेको बन्दका क्रममा उपत्यकाका आधा दर्जन स्थानमा नक्कली बम फेला परेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले मंगलबार गरेको नेपाल बन्दको देशैभरी सामान्य प्रभाव परेको छ । बन्दले जनजीवन सामान्य प्रभावित बनेको छ । देशैभरी सानातिना घटनाबाहेक ठूला घटना भएका छैनन् ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको भरतपुर रिजाल चोकमा मंगलबार बिहान देखा परेको शंकास्पद् वस्तु सेनाले नष्ट गरेको छ ।
अज्ञात समूहले महेन्द्रराजमार्ग अन्तरगत पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा रोकिराखेका २ वटा ट्रकमा आगजनी गरेका छन् । महेन्द्रराजमार्गको रत्न पेट्रोलपम्प नजिक रोकिरहेको ना२ख २५४८, ना२ख ८४८७ पराल बोकेको गाडिमा आगजनी गरेको हो ।
एक हजारमा ढाड सेवा
गुराँस गाउँपालिका हुँदै कर्णाली राजमार्ग जोड्ने रतिखोलामा पक्की पुल नहुँदा यात्रुलाई सास्ती भएको छ । खोलामा बाढी आएपछि स्थानीयवासी घण्टौं अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
सीटीईभीटीद्वारा ऐनविपरीत अनुमति
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले ऐनविपरीत १ सय ५ विद्यालयलाई ३ वर्षे डिप्लोमा तह सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ ।
सांसदहरूले स्थानीय तहले जथाभावी उठाइरहेको करलाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले अव्यवस्थित रूपमा करको दायरा बढाउँदा जनताको आक्रोश बढ्ने र संघीय व्यवस्था नै कमजोर हुने बताए ।
पोखराको एक रिसोर्टले फेवातालको झन्डै डेढ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको फेला परेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिले झन्डै २२ आना जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएका केही व्यवस्थाले पत्रकारमाथि समेत पेसागत जोखिम बढ्ने देखिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता, गालीबेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयमा पत्रकारसमेत पेसागत कामकारबाहीका सिलसिलामा जोडिने जोखिम बढेको हो ।
कर लाग्ने वस्तुको सूचीमा अब खसीबोका र राँगाभैसीसमेत थपिएका छन् । स्थानीय तहले कर थपेपछि गाउँगाउँ पुगेर खसीबोका किनबेच गर्दै आएका सिद्धपुरका हरिसिंह धामी किसानसँगै असुल्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले प्रतिखसीबोका २ सयका दरले निकासीकर लिन थालेको छ ।
वि.सं. १९१० सालमा जंगबहादुरले बनाएको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी लागू हुन लागेको नयाँ ऐनले इलाजसम्बन्धी गरेको व्यवस्थामा बिरामीको ज्यान गए चिकित्सकलाई जन्मकैदसम्म हुने प्रावधान राखेको छ ।
अज्ञात समूहले भक्तपुरका दुई स्थानमा राखेको प्रेसर कुकर बम सेनाले निष्क्रिय पारेको छ । अरनिको सडकखण्ड अन्तर्गत सूर्यविनायक काँल्हाचास्थित सडक किनारमा र मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ लोकन्थलीस्थित ६ लेन सडकको सर्भिस ट्रयाकमा मंगलबार बिहानै प्रेसर कुकर बम भेटिएको थियो ।